Ndị Okenye Akpọọla Oku Ka E Nyochaa Okorọcha – Ụwandịigbo
Ndị Okenye Akpọọla Oku Ka E Nyochaa Okorọcha
Posted August 30, 2019 April 2, 2020 Omenka
Maazị Rochas Okorocha
Ọgbakọ ndị okenye kpọrọ onwe ha Orlu Elders Council akpọkuola Onyeọchịchị Steeti ahụ bu Maazị Emeka Ihedioha ka o nyochaa etu onye chịburu steeti ahụ bụ Maazị Rochas Okorocha siri mefu ego mgbe ọ nọ nʻọchịchị.
Onyeisioche ndị otu a, bụ Ọkammụta Francis Dike (SAN), kwuru nke a mgbe o jere kpọtụrụ Osote Gọvanọ bụ Maazị Gerald Irona. Ọkammụta Dike boro ebubo wee sị na Maazị Okorocha mere mpụ dị egwu na Steeti Imo site nʻimefu ego etu o siri masị ya nakwa ịkpakọrọ ihe dịịrị steeti niile ka a aga-asị na ọ bụ nke ya. Ọ gakwara nʻihu kwu na Maazị Okorocha nyere iwu dị iche iche nke bụ iwu arụrụala megidere Steeti Imo.
Mgbe ọ na-aga nʻihu, Ọkammụta Dike kpọkwara oku ka a kpọghachi Onyeeze Cletus Ilomuanya onye nke e wepụburu dịka onyeisioche ndị ọchịchị ọdịnala.
⟵Achịbishọọpụ Emmanuel Chukwuma Amaala Ọkwa Gbasara Ruga
Mmemme Ụbọchị Ndịigbo nʻAmerika⟶